Ukufakwa amanothi insimbi engagqwali multistage futha centrifugal
I Amanothi Ukufakwa ngoba Engagqwali multistage centrifugal Pump: 1. Kusukela insimbi engagqwali multistage centrifugal ukufakwa futha ubuchwepheshe, igemfe ukuncela kudinga uphawu isimo esiqinile, asikwazi ukuba ipayipi ukuvuza noma ukuvuza, kungenjalo uzobhubhisa degree cleaner ngesikhathi i amanzi ...
umlawuli ku 18-06-28
Ngokuvamile, I centrifugal Pump Test Faka Uhlobo Test futhi Factory Test: I futha centrifugal test ─ uhlobo ukuhlolwa Uhlobo test kuhlanganisa: egijima test, ukusebenza yokuhlola kanye captivation test futhi umsindo vibration ukuhlolwa, njll A: Ukuhlolwa ukugijima Lapho egijima test, kufanele uhlole izinga lokushisa rise futha ...
Centrifugal futha yesondlo sehlukaniswe zamabanga aphansi naphezulu, futhi okuqukethwe ethize zizofakwa?
Centrifugal futha yesondlo sehlukaniswe zamabanga aphansi naphezulu, futhi okuqukethwe ethize zizofakwa? Centrifugal okuqukethwe futha ezingeni 1 yesondlo kanje: 1) uhlole ukuze uqiniseke ukuthi nokupakisha asisifushane, indlala engachemile, akukho ukuwohloka ukuvuza super collar; 2) hlola ukuthi kukhona ...
Isexwayiso! Pumps babe isimo elandelayo kufanele ngokushesha ayeke!
"Uma uthola noma yiziphi amaphuzu alandelayo kufanele ayeke futha" (1) I futha une amanzi ukuvuza; (2) Lapho motor futha ebhema noma abambe umlilo; (3) Pump babe umsindo okungavamile; (4) Lapho izinga lokushisa eziveza liphuma-ngokushesha kakhulu noma ebhema; (5) Lapho futha une vibration eqinile;